Samsung 360 Gburugburu, ntinye nke vidiyo 360 maka ndị ọkachamara | Akụkọ akụrụngwa
Samsung 360 Round, ntinye nke vidiyo 360 maka ndị ọkachamara
N'ahịa anyị nwere ike ịchọta ụdị dị iche iche na-enye anyị ohere ịme ndekọ ederede 360, ka emesịa jiri ha mezie eziokwu ha. Mana ọ bụghị ha niile nwere ọnụahịa dị ọnụ ala ma nye anyị ezigbo nsonaazụ. Maka onye ọrụ nkịtị, Samsung na-enye anyị Gear 360, ngwaọrụ nke igwefoto 2 jikwaa nke ahụ mere ka anyị nwee ike idekọ ebe anyị bi, ọ bụ ezie na ọ bụghị n'ụzọ dị mfe.
Maka gburugburu ma ọ bụ ọnọdụ dị mgbagwoju anya, Samsung amalitela igwefoto ọhụrụ ejiri na ngalaba ndị ọkachamara karịa nke ahụ na-enye anyị igwefoto 17, n'ụzọ ga-enye anyị ohere ịdekọ gburugburu ebe obibi anyị na-enweghị ịmegharị mmegharị dị ka a ga - asị na anyị na - enweta ijiji.
Samsung 360 Round na-achịkwa 8 igwefoto dị na ntanetị na otu na elu ka ịdekọ na ntanetị. Ihe nlereanya a na-enye anyị ohere ịdekọ vidiyo na mkpebi 4k na ụda 3D nwee ike mụta nwa ọ bụla na eziokwu ọ bụla ngwaọrụ. Ma na mgbakwunye, ọ na-enye anyị ohere ịme mgbasa ozi dị ndụ, dị mma maka mgbe anyị chọrọ ịgbasa ihe omume dị ka egwu, egwuregwu ...
Igwefoto ọ bụla na-enye anyị mkpebi nke 2 mpx yana oghere nke f / 1.8. Mkpebi kachasị nke anyị nwere ike ịdekọ bụ 4k na 30 fps. Iji dekọọ ụda nke gburugburu ebe obibi, Samsung 360 Round nwere igwe okwu igwe na 6 nwere ike ịgbakwunye 2 ọzọ site na ọdụ ụgbọ mmiri abụọ ọ na-enye anyị. Ọ na-eguzogide ọgwụ na-agbapụta mmiri na ájá na asambodo IP65, ọ nwere nchekwa dị n'ime nke 256 GB site na kaadị microSD ma ọ bụ ruo 2 TB site na SSD. Akụkụ nke ngwaọrụ a bụ millimita 205 na dayameta site na 76,8 n'ogo ma dị ọnụ na 1.93 n'arọ.
Banyere ọnụahịa ahụ, ụlọ ọrụ ahụ amabeghị ya, mana ebumnuche ya na gburugburu ebe ndị ọkachamara, ọ ga-aka karịa ọnụahịa ahụ gbapụrụ n’akpa ọtụtụ ndị ọrụ. Firmlọ ọrụ Finnish bụ Nokia, kwalitere ụdị ngwaọrụ ahụ na ahịa afọ ole na ole gara aga maka gburugburu ebe ndị ọkachamara, mana ọ dị nwute na n'ihi obere ihe ịga nke ọma na nso nso a amanyela ịkwụsị ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Samsung 360 Round, ntinye nke vidiyo 360 maka ndị ọkachamara
Facebook Messenger na - enye gị ohere izipu ego na PayPal